जापान जान चाहाने नेपालीलाई आयो यस्तो खुशीको खबर…..::Leading Nepal News
साउन ३०, काठमाडौं । जापान जाने कामदारको भाषा परीक्षा तोकिएको छ । नर्स र केयरगिभरका लागि जापान जाने कामदारको भाषा परीक्षा कात्तिक ११ र १२ गते हुने टुंगो लागेको छ । केही समयअघि नेपाल र जापानका प्राविधिक टोलीबीच समझदारी भएअनुसार नेपाली कामदार जापान पठाउने सम्बन्धमा प्रक्रिया लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले सोही छलफलका आधारमा भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणको मिति टुंगो लागेको जानकारी दिए ।
भाषा परीक्षामा पास भएका कामदारको सिप परीक्षण पनि कात्तिक १९ र २० गते गरिने भएको छ । भाषासँगै सिप परीक्षणमा सहभागि भई उत्तीर्ण भएका कामदारहरु रोजगारीका लागि जापान जान पाउने छन् । समझदारीमा पारित मस्यौदा अनुसार कामदारले जापानी भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने ४ तहको भाषा पास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहसचिव उमेश ढुंगानाका अनुसार कामदारले एकपटक जापानी भाषा परीक्षा पास गरेपछि सो परीक्षाको मान्यता १० वर्षसम्म हुन्छ ।यो पनि पढ्नुहोस्…कुकुरले टोकेको नभन्दा ज्यान गयो !
कुकुरले टोकेको कुरा लुकाउँदा ललितपुरमा एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका–६ स्थित नेपाल असहाय बाल घरमा बस्दै आएकी १७ वर्षीया कनिषा अर्यालको साउन १९ गते मृत्यु भएको हो। सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीकी उनी १२ कक्षामा पढ्थिन्।जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख खगेश्वर गेलालका अनुसार अर्यालका बाआमा कपनमा बस्छन्। जेठ १८ देखि २५ गतेसम्म उनी बाआमा भेट्न गोदावरीबाट कपन गएकी थिइन्। त्यहीबेला उनलाई कुकुरले टोकेको थियो। तर उनले यो कुरा कसैलाई बताइनन्। कुकुरको टोकाइबाट घुँडाभन्दा पछाडि थोरै मात्र घाउ लागेको थियो। केही दिनमा उनको घाउ निको भयो। साउनसम्म कुनै समस्या देखिएन। साउन १४ गते उनलाई महिनावारी भयो। महिनावारीको समयमा ढाड दुखेके बताएकी थिइन्। दुखाइ बिस्तारै कम्मरदेखि तलको भागमा फैलियो। अन्त्यमा सास फेर्न नसक्ने अवस्थासम्म पुग्यो।
गेलालका अनुसार दुखाइ कम नभएपछि उनलाई १७ गते मेडिसिटी अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। अस्पताल लैजाँदा रेबिजको लक्षण देखिन थालेको थियो। बाटोमा गाडीको सिसाबाट हावा छिर्दा डराउन थालिन्। बाथरुममा पानी खोल्दा पनि डराउन थालिन्। गेलालले भने, ‘रेबिजका बिरामीमा वाटरफोयिबा, एरोफोबियाको समस्या हुन्छ। उनीहरू पानी र हावाबाट डराउँछन्।’ मेडिसिटीमा पुगेपछि डाक्टरले समस्या बुझ्दै जाँदा उनले कुकुरले टोकेको कुरा सुनाएकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई टेकु लगिएको थियो। समस्या विकराल भइसकेकाले उनको उपचार हुन नसकेको गेलालले बताए। उनले आफूसँगै बस्ने साथी र होस्टल वार्डेनलाई समेत उक्त घटना नबताएका कारण समस्या भएको गेलालले बताए। यसै विषयमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको टोली बुधबार घटनास्थल पुगेको थियो। रेबिज लागिसकेपछि बिरामीको श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ। पानी निल्न कठिन हुन्छ। ‘पानी देख्नेबित्तिकै घाँटीको नसा खुम्चिन्छ’, गेलालले भने, ‘हावा चल्दा पनि डराउँछन्।’ उक्त संस्थाका अन्य बालबालिकालाई पनि रेबिजविरुद्धको सुई लगाइसकेको अनुगमन क्रममा भेटिएको उनले बताए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण कनिषा र उनका भाइ उक्त संस्थामा बसिरहेका थिए। एसईईमा ग्रेड ए ल्याएकी उनी जेहेन्दार र लगनशील थिइन्। भाइलाई कुकुरले टोक्दा टेकुमा पर्‍याएर सुई लगाएकी उनले आफूलाई कुकुरले टोकेको कुरा भने ढाँटेकी थिइन्।
रेबिजबाट कसरी बच्ने ? कुकुर वा बाँदरले टोक्यो भने रेबिजको कीटाणु उनीहरूको र्‍यालबाट सर्छ। नसाबाट शरीरमा रेबिजका भाइरस पस्छन्। एकदमै मन्द गतिमा सर्छ। तर, दिमागमा पुगेपछि बिरामीको मृत्यु हुन्छ। खुट्टामा टोकेको हो भने त्यो सरेर दिमागमा पुग्न समय लाग्छ। तर, घाँटीमा टोकेको हो भने छिट्टै दिमागमा पुग्छ। एन्टिरेबिज सुईले यसलाई रोक्न सक्छ। रेबिज प्राणघातक रोग भएकाले लक्षण देखिइसकेपछि उपचार सम्भव हुँदैन। कुकुरले टोक्नेबित्तिकै धाराबाट बगिरहेको पानीमा राम्ररी पखाल्नुपर्छ। साबुनपानीले र्‍याल पखाल्दा जान सक्छ। तातोपानीले राम्रोसँग केही मिनेटसम्म धोए पनि किशोरीको ज्यान बच्न सक्छ। आजको अन्नपूर्णपोस्टमा खबर छ ।
सन्दीप लामिछानेले अमेरिकाको भिसा पाएपछि..